Mwari Anoruramisira Anoita Zvakanaka Nguva Dzose | Swedera Pedyo
1, 2. (a) Kusaruramisirai kwakakomba uko Josefa akaitirwa? (b) Jehovha akaruramisa sei kusaruramisira kwacho?
KWAKANGA kuri kusaruramisira kukuru. Murume wechiduku munaku akanga asina mhosva yaaiva apara, asi akangokaruka apfigirwa muchitokisi chomugomba, achipomerwa zvenhema kuti akaedza kubata chibharo. Asi uku kwakanga kusiri kutanga kwake kusangana nokusaruramisira. Makore mazhinji akanga apfuura, aine makore 17, murume wechiduku uyu, Josefa, akanga atengeswa nemadzikoma ake, ayo akapotsa amuuraya. Ipapo akanga atengeswa ava muranda kune imwe nyika. Ikoko akanga aramba kuita unzenza nomudzimai watenzi wake akanga amuvavarira. Mukadzi akanga arambwa uyu akaronga kupomera kwenhema, uye ndiwo mapindiro akaita Josefa muchitokisi. Zvinosiririsa kuti pairatidza sepakanga pasina wokuti apindire kubatsira Josefa.
Josefa akatambura zvisina kururamisira ari “mugomba”
2 Zvisinei, zvaiva mumeso aMwari uyo “unoda kururama nokururamisa.” (Pisarema 33:5) Jehovha akaita chiito kuti aruramise kusaruramisira kwacho, achifambisa zvinhu zvokuti Josefa akazosunungurwa pakupedzisira. Kupfuura ipapo, Josefa—murume akanga akandwa “mugomba”—pakupedzisira akazogadzwa munzvimbo yebasa guru nokukudzwa kunoshamisa. (Genesi 40:15; 41:41-43; Pisarema 105:17, 18) Pakupedzisira Josefa akapupurirwa kuti akanga asina mhaka, uye akashandisa nzvimbo yake yakakwirira kufambisira mberi zvinangwa zvaMwari.—Genesi 45:5-8.
3. Nei zvisingashamisi kuti tose tinoda kubatwa nenzira yokururamisira?
3 Nhoroondo yakadaro inosvika pamwoyo yedu, handizvo here? Ndiani wedu asati amboona kusaruramisira kana kuti asati amboitirwa zvisina ruramisiro? Chokwadi, tose tinoda kubatwa zvakanaka nenzira yokururamisira. Izvi hazvishamisi, sezvo Jehovha akatipa unhu hunoratidza unhu hwake, uye ruramisiro ndechimwe chinhu chikuru paunhu hwake. (Genesi 1:27) Kuti tizive Jehovha zvakanaka, tinofanira kunzwisisa pfungwa yake yeruramisiro. Nokudaro tinogona kusvika pakunzwisisa nzira dzake dzakarurama zvakawedzerwa tonzwa tichida kuswedera pedyo naye.
4. Mukuona kwevanhu, ruramisiro inowanzonzwisiswa sei?
4 Mukuona kwevanhu, kururamisira kunowanzonzwisiswa sokungoshandiswa zvisina rusarura kwezvinorayirwa nomutemo. Rimwe bhuku rinonzi Right and Reason—Ethics in Theory and Practice rinotaura kuti “ruramisiro yakabatana nomutemo, musengwa, kodzero, uye mabasa, uye inoyera mutongo wayo nokusasarura uye inopa zvakakodzera.” Zvisinei, ruramisiro yaJehovha hakusi kungoshandiswawo zvako kwemitemo nemhaka yokungonzwa musengwa wacho.
5, 6. (a) Mashoko omutauro wakatanga kushandiswa anoshandurwa kuti “ruramisiro” anorevei? (b) Zvinorevei kuti Mwari akarurama?
5 Kufara nokudzika kweruramisiro yaJehovha kunogona kunzwisiswa zviri nani nokufunga nezvemashoko omutauro wakatanga kushandiswa muBhaibheri. MuMagwaro echiHebheru, mashoko makuru matatu anoshandiswa. Shoko rinowanzoshandurwa kuti “ruramisiro” rinogonawo kushandurwa kuti “zvakarurama.” (Genesi 18:25) Mamwe mashoko acho maviri anowanzoshandurwa kuti “kururama.” MuMagwaro echiKristu echiGiriki, shoko rinoshandurwa kuti “kururama” rinorondedzerwa so“kuva akarurama kana kuti anoruramisira.” Nokudaro, chaizvoizvo hapana musiyano mukuru pakati pokururama neruramisiro.—Amosi 5:24.
6 Nokudaro, Bhaibheri parinotaura kuti Mwari ane ruramisiro, riri kutiudza kuti anoita zvakarurama nokusasarura uye kuti anogara achidaro asingasaruri. (VaRoma 2:11) Chaizvoizvo, hazvifungiki kuti aizoita neimwe nzira. Erihu akatendeka akataura kuti: “Mwari haangatongoiti zvisakarurama; Wamasimba ose haangatongoiti zvakaipa.” (Jobho 34:10) Zvechokwadi, hazvibviri kuti Jehovha ‘aite zvakaipa.’ Nei? Nokuda kwezvikonzero zviviri zvinokosha.
7, 8. (a) Nei Jehovha asingagoni kuita nokusaruramisira? (b) Chii chinoita kuti Jehovha ave akarurama kana kuti anoruramisira mune zvaanoita?
7 Kutanga, iye mutsvene. Sezvinotaurwa muchitsauko 3, Jehovha mutsvene-tsvene uye akarurama. Naizvozvo haagoni kuita zvisakarurama, kana kuti nokusaruramisira. Funga kuti izvozvo zvinorevei. Utsvene hwaBaba vedu vokudenga hunotipa zvikonzero zvakasimba zvokuvimba kuti haazombobati vana vake zvisina kufanira. Jesu aiva nechivimbo chakadaro. Pausiku hwokupedzisira hwoupenyu hwake hwepasi pano, akanyengetera achiti: “Baba Vatsvene, [tarisirai vadzidzi] nemhaka yezita renyu.” (Johani 17:11) “Baba Vatsvene”—muMagwaro, kudana kwakadaro kunoshandiswa kuna Jehovha bedzi. Izvi zvakakodzera, nokuti hakuna baba vomunhu vangafanana naIye pautsvene. Jesu aiva nokutenda kwakakwana kwokuti vadzidzi vake vaizova vakachengeteka mumaoko aBaba, avo vakachena zvakakwana uye vakaparadzana zvachose nezvivi zvose.—Mateu 23:9.
8 Chechipiri, Mwari ane rudo rusina udyire. Rudo rwakadaro runomuita kuti ave akarurama, kana kuti ane ruramisiro mukubata kwake nevamwe. Asi kusaruramisira nemarudzi ako akawanda—kubatanidza urudzi, rusaruraganda uye kusarura—zvinowanzobva pamakaro noudyire, zvakapesana norudo. Pamusoro paMwari worudo, Bhaibheri rinotipikira kuti: “Jehovha wakarurama; unoda zvakarurama.” (Pisarema 11:7) Jehovha anoti nezvake: “Ini Jehovha ndinoda zvakarurama.” (Isaya 61:8) Hazvinyaradzi here kuziva kuti Mwari wedu anofarira kuita zvakarurama, kana kuti kururamisira?—Jeremia 9:24.
Tsitsi uye Ruramisiro Yakakwana yaJehovha
9-11. (a) Kuwiriranai kuripo pakati peruramisiro yaJehovha netsitsi dzake? (b) Ruramisiro yaJehovha pamwe netsitsi dzake zvinooneka sei munzira yaanobata nayo nevanhu vanotadza?
9 Ruramisiro yaJehovha, kungofanana nezvimwe zvinhu zvose zvounhu hwake husingaenzaniswi, yakakwana, hapana chero chinhu chinoshayikwa pairi. Achirumbidza Jehovha, Mosesi akanyora kuti: “Iye ndiro dombo, basa rake rakakwana; nokuti nzira dzake dzose dzakarurama. Ndiye Mwari wakatendeka, usinganyengeri, wakarurama, ndowazvokwadi.” (Dheuteronomio 32:3, 4) Kuratidzwa kweruramisiro yaJehovha kwose hakuna mhosva—haambonyanyisi kunzwira tsitsi, haambonyanyisi kuita nehasha.
10 Pane kuwirirana kuripo pakati pokururamisira kwaJehovha netsitsi dzake. Pisarema 116:5 rinoti: “Jehovha une nyasha, wakarurama [“anoruramisira,” The New American Bible]; zvirokwazvo, Mwari wedu une tsitsi.” Hungu, Jehovha anoruramisira uye ane tsitsi. Zviviri izvi hazvipesani. Kuratidza kwake tsitsi hakusi kurerutsa ruramisiro yake, sokunge kururamisira kwake zvimwe kwaizova kwakanyanyisa. Asi, zviviri izvi anowanzozviratidza panguva imwe, kunyange muchiito chimwe. Funga nezvomuenzaniso uyu.
11 Vanhu vose vanongoberekwa vari vatadzi nokudaro vakakodzera mubayiro wezvivi—rufu. (VaRoma 5:12) Asi Jehovha haafariri kufa kwevatadzi. Iye ndi“Mwari unokanganwira vanhu, une nyasha, nengoni zhinji.” (Nehemia 9:17) Kunyange zvakadaro, nemhaka yokuti mutsvene, haagoni kufuratira zvisakarurama. Zvino anoratidza sei tsitsi kuvanhu vakangoberekwa vane chivi? Mhinduro yacho inowanikwa mune chimwe chokwadi chinokosha cheShoko raMwari: Kupa kwaJehovha rudzikinuro kuti vanhu vaponeswe. Muchitsauko 14 tichadzidza zvimwe pamusoro pourongwa hworudo uhwu. Hune ruramisiro yakadzama panguva imweyo kuri kuratidzwa kwetsitsi kukuru. Kuburikidza nahwo, Jehovha anogona kuratidza tsitsi huru kuvatadzi vanopfidza asi achichengeta mitemo yake yeruramisiro yakakwana.—VaRoma 3:21-26.
Ruramisiro yaJehovha Inofadza
12, 13. (a) Nei ruramisiro yaJehovha ichitiswededza pedyo naye? (b) Dhavhidhi akaguma ati chii pamusoro peruramisiro yaJehovha, uye izvi zvingatinyaradza sei?
12 Ruramisiro yaJehovha hachisi chinhu chisingafadzi chinotyisa, asi inoita kuti timude nokuswedera pedyo naye. Bhaibheri rinorondedzera zvakajeka tsitsi dziri mururamisiro yaJehovha kana kuti kururama. Ngatimboona dzimwe dzenzira dzinofadza idzo Jehovha anoshandisa nadzo ruramisiro yake.
13 Ruramisiro yakakwana yaJehovha inomuita kuti ade kuratidza kutendeka nokuvimbika kuvashumiri vake. Munyori wepisarema Dhavhidhi akasvika pakunzwisisa rutivi urwu rweruramisiro yaJehovha nemhaka yezvakaitika kwaari. Kubva mune zvaakazvionera uye kubva mukudzidza kwake nzira dzaMwari, Dhavhidhi akaguma ati chii? Akazivisa kuti: “Jehovha unoda zvakarurama, haasiyi vatsvene vake; vanochengetwa nokusingaperi.” (Pisarema 37:28) Ichi chipikirwa chinonyaradza zvikuru! Mwari wedu haazombosiyi avo vakavimbika kwaari chero zvodini. Naizvozvo tinogona kuvimba nokuva pedyo kwake nokutarisira kwake kworudo. Ruramisiro yake inopikira izvi!—Zvirevo 2:7, 8.
14. Kuva nehanya kwaJehovha nokuda kwevanotambura kunoonekwa sei muMutemo waakapa kuna Israeri?
14 Ruramisiro yaMwari inonyatsoziva zvinodiwa nevanotambura. Kuva nehanya kwaJehovha nevakadzvinyirirwa kunonyatsooneka muMutemo waakapa kuna Israeri. Somuenzaniso, Mutemo wakanga une gadziriro chaidzo dzokuti nherera nechirikadzi dzitarisirwe. (Dheuteronomio 24:17-21) Achiona kuti upenyu hungava hwakaomera mhuri idzodzo sei, Jehovha pachake akava Mutongi wavo uye Mudziviriri akaita sababa, uyo “unoruramisira nherera nechirikadzi.” * (Dheuteronomio 10:18; Pisarema 68:5) Jehovha akanyevera vaIsraeri kuti kudai vaizotambudza vakadzi nevana vaisava nomudziviriri, aisazombotadza kunzwa kuchema kwevakadaro. Akataura kuti: “Kutsamwa kwangu kuchamuka.” (Eksodho 22:22-24) Kunyange zvazvo hasha dzisiri chimwe chinhu chikuru paunhu hwaJehovha, anotsamwiswa zvakarurama nezviito zvemaune zvokusaruramisira, kunyanya kana vanoitirwa vacho vari vakaderera uye vasina mubatsiri.—Pisarema 103:6.
15, 16. Chii chiri uchapupu hunoshamisa zvechokwadi hwokusasarura kwaJehovha?
15 Jehovha anotipikirawo kuti haa“tsauri vanhu, kana kugamuchira mubayiro.” (Dheuteronomio 10:17) Kusiyana nevanhu vazhinji vane simba kana kuti chiremera, Jehovha haatsauswi noupfumi kana kuti nezvinoonekwa kunze. Haana rusaruro zvachose. Funga nezvouchapupu hunoshamisa zvechokwadi hwokusasarura kwaJehovha. Mukana wokuva vanamati vake vechokwadi, tichitarisira upenyu husina mugumo, hauna kungochengeterwa vapfumi vashomanana. Asi, “murudzi rwose munhu anomutya uye anoita zvakarurama anogamuchirwa naye.” (Mabasa 10:34, 35) Tariro inoshamisa iyi yakazaruka kuna vose pasinei nokuti vanoonekwa sei munzanga, ruvara rweganda ravo, kana kuti nyika yavanogara. Iyoyo handiyo ruramisiro yechokwadi yakanakisisa here?
16 Pane rimwewo divi riripo pamusoro peruramisiro yakakwana yaJehovha ratinofanira kuongorora pamwe nokuremekedza: nzira yaanobata nayo nevadariki vemitemo yake yakarurama.
Haaregi Kupa Chirango
17. Tsanangura kuti nei kusaruramisira kuri munyika ino kusingaiti kuti kururama kwaJehovha kupokanwe.
17 Vamwe vangabvunza kuti: ‘Sezvo Jehovha asingapembedzi zvisakarurama, tingatsanangura sei kutambura kusina ruramisiro nemiitiro youori zvakatekeshera kwazvo munyika yanhasi?’ Kusaruramisira kwakadaro hakuiti kuti kururama kwaJehovha kupokanwe chero munzira ipi zvayo. Kusaruramisira kuzhinji munyika ino yakaipa migumisiro yechivi icho vanhu vakagara nhaka kuna Adhamu. Munyika umo vanhu vasina kukwana vakasarudza nzira dzavo dzechivi, kusaruramisira kwakazara—asi kwete kwenguva refu.—Dheuteronomio 32:5.
18, 19. Chii chinoratidza kuti Jehovha haazoshiviriri nokusingaperi avo vanoputsa nemaune mitemo yake yakarurama?
18 Kunyange zvazvo Jehovha achiratidza tsitsi huru kune avo vanoswedera pedyo naye nomwoyo wose, haazoshiviriri nokusingaperi mamiriro ezvinhu anozvidzisa zita rake dzvene. (Pisarema 74:10, 22, 23) Mwari weruramisiro haasekwi; haazodziviriri vanotadza nemaune pakutongwa kwakaoma kunokodzerana nenzira yavo. Jehovha ndi“Mwari uzere nyasha nengoni, unononoka kutsamwa, une tsitsi huru nezvokwadi, . . . asi usingapembedzi munhu une mhosva.” (Eksodho 34:6, 7) Zvechokwadi, sezvinotaura mashoko aya, Jehovha pane dzimwe nguva akawana zvichidiwa kutonga vanoputsa mitemo yake yakarurama nemaune.
19 Tora somuenzaniso, kubata kwaMwari naIsraeri wekare. Kunyange apo vakanga vagara muNyika Yakapikirwa, vaIsraeri vakaramba vachidzokera mukusatendeka. Kunyange zvazvo nzira dzavo dzouori dzakaita kuti Jehovha “anzwe shungu,” haana kukurumidza kuvarasa. (Pisarema 78:38-41) Asi, netsitsi akavapa mikana yokuchinja nzira yavo. Akateterera achiti: “Handifariri rufu rwowakaipa, asi kuti wakaipa atendeuke panzira yake; tendeukai, tendeukai panzira dzenyu dzakaipa, nokuti muchafireiko, imi imba yaIsraeri?” (Ezekieri 33:11) Achiona kuti upenyu hunokosha, Jehovha akaramba achitumira vaprofita vake kuitira kuti vaIsraeri vatendeuke panzira dzavo dzakaipa. Asi ruzhinji rwevanhu vane mwoyo yakaoma rwakaramba kuteerera nokutendeuka. Pakupedzisira, nokuda kwezita rake dzvene nezvose zvarinomirira, Jehovha akavapa mumaoko evavengi vavo.—Nehemia 9:26-30.
20. (a) Kubata kwaJehovha nevaIsraeri kunotidzidzisei nezvake? (b) Nei shumba iri chiratidzo chakakodzera cheruramisiro yaJehovha?
20 Kubata kwaJehovha nevaIsraeri kunotidzidzisa zvakawanda nezvake. Tinodzidza kuti maziso ake anoona zvose anoona kusarurama uye kuti iye anorwadziwa zvikuru nezvaanoona. (Zvirevo 15:3) Zvinosimbisawo kuziva kuti anotsvaka kuratidza ngoni kana pane chikonzero chokudaro. Pamusoro pezvo, tinodzidza kuti ruramisiro yake haimboitwi zvokukurumidzira. Pamusana pokushivirira kwaJehovha nomwoyo murefu, vanhu vazhinji vanoguma vafunga zvisizvo kuti haazombotongi vakaipa. Asi ichocho hachisi chokwadi, nokuti kubata kwaMwari nevaIsraeri kunotidzidzisawo kuti kushivirira kwaMwari kune pakunogumira. Jehovha akatsiga mukururama. Kusiyana nevanhu, avo vanowanzodzokera shure pakururamisira, haambozezi kutsigira zvakarurama. Nenzira yakakodzera, shumba sechiratidzo cheruramisiro youshingi inobatanidzwa nokuvapo kwaMwari nechigaro choUmambo. * (Ezekieri 1:10; Zvakazarurwa 4:7) Nokudaro tinogona kuva nechokwadi chokuti achazadzisa chipikirwa chake chokubvisa kusaruramisira pasi pano. Hungu, matongero ake anogona kupfupikiswa sezvinotevera: kuva akatsiga pazvinodiwa, tsitsi chero pazvinobvira.—2 Petro 3:9.
Kuswedera Pedyo naMwari Weruramisiro
21. Patinofungisisa pamusoro pemashandisire anoita Jehovha ruramisiro, tinofanira kufunga nezvake munzirai, uye nei?
21 Patinofungisisa pamusoro penzira iyo Jehovha anoruramisira nayo, hatifaniri kufunga nezvake somutongi akaoma asina ushamwari anongoda kupa mutongo kuvatadzi. Asi tinofanira kufunga nezvake saBaba vane rudo asi vakatsiga avo vanobata nevana vavo nguva dzose nenzira yakanakisisa inobvira. SaBaba vane ruramisiro, kana kuti vakarurama, Jehovha anodzikamisa kumira kwake pane zvakarurama netsitsi kuvana vake vepasi pano, avo vanoda kubatsirwa naye nokukanganwirwa.—Pisarema 103:10, 13.
22. Achitungamirirwa neruramisiro yake, Jehovha akaita kuti zvibvire kwatiri kuva netariro yei, uye nei achibata nesu nenzira iyi?
22 Tinoonga kwazvo kuti ruramisiro yaMwari hakusi kungopa mutongo kuvatadzi! Achitungamirirwa neruramisiro yake, Jehovha akaita kuti zvibvire kwatiri kuva netariro inofadza—upenyu husina mugumo, hwakakwana munyika umo “kururama kuchagara.” (2 Petro 3:13) Mwari wedu anobata nesu nenzira iyi nokuti ruramisiro yake ndeyokutsvaka kuponesa pane kuparadza. Chokwadi, kunzwisisa zviri nani ukuru hweruramisiro yaJehovha kunotiswededza pedyo naye! Muzvitsauko zvinotevera, tichanyatsotarisisa kuti Jehovha anoratidza sei unhu uhwu hwakakwirira.
^ ndima 14 Kunyange zvazvo shoko rechiHebheru rokuti “nherera” richitaura munhurume, izvi hazvimboratidzi hazvo kusava nehanya nevasikana. Jehovha akabatanidza muMutemo nyaya yechisarudzo chokutonga chakapa vanasikana vaZerofehadhi vaiva nherera kodzero yenhaka. Chisarudzo ichocho chakava muenzaniso, nokudaro chichitsigira kodzero dzevanasikana nherera.—Numeri 27:1-8.
^ ndima 20 Sezvineiwo, Jehovha anozvifananidza neshumba pakutonga vaIsraeri vasina kutendeka.—Jeremia 25:38; Hosea 5:14.
Jeremia 18:1-11 Jehovha akadzidzisa sei Jeremia kuti haakurumidzi kupa mutongo wakaoma?
Habhakuki 1:1-4, 13; 2:2-4 Jehovha akasimbisa sei Habhakuki kuti aisazoshivirira kusaruramisira nokusingaperi?
Zekaria 7:8-14 Jehovha anonzwa sei pamusoro pevanhu vanovhiringidza kodzero dzevamwe?
VaRoma 2:3-11 Jehovha anotonga vanhu nemarudzi pamusoro pei?
Vanhu vanodavira zvakasiyana-siyana nezveZuva Rokutongwa. Rinofanira kutyiwa here? Chii chichaitika pazuva iri?